January | 2018 | Hassan Mudane
January 27, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Maqaallo	· Leave a comment
Mad-habka itus oo itaabsii Casharkii afaraad waxa aynu ku soo baranay felsafadda cimibaarista gaar ahaan iskuul fekerka toganidda. Casharkan waxa aynu ku baran doonaa mid ka mida mad-habyada iskuul fekerkaas. Ka hor inta aan gudaha u galin casharkan, bal aan dib u yara milicsado ole-olehii Comte ee ku saabsanaa weydiimaha ka madax bannaan rumaysashada khuraafaadka […]
January 19, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Maqaallo	· Leave a comment
Felsafadda Cilmibaarista Casharkii saddexaad waxa aynu ku soo baranay xeerarkii laga dejiyey ilaalinta xogta iyo macluumaadka cilmibaarista. Casharkan waxa aynu ku baran doonaa felsafadda baarista gaar ahaan labada iskuul feker, ee saldhiga u ah baaris cilmiyeed walba. Waxaa jirta laba hab oo aan isleeyahay in ay waajib tahay in la maro inta lagu guda jiro […]
January 14, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Ilaalinta Xogta iyo Macluumaadka Cilmibaarista Casharkii labaad waxa aynu soo baranay anshaxa cilmibaarista gaar ahaan ‘The Nuremberg Code.’ Casharkan waxa aynu ku baran doonaa xeerarka ka yaalla ilaalinta xogta iyo macluumaadka cilmibaarista. Inkasta oo ay ku xiran tahay su’aalaha iyo ujeedka baarista, haddana waa lama huraan in baare walba uu soo uruuriyo xog iyo macluumaad […]
January 9, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Buugga Habeen Kaama Tagin waxaa qoray Amal Gilin, wuxuuna soo baxay gu’gii 2016. Waxa uu ka kooban 150 bog, waxaa lagu daabacay magaalada Hargeysa. Farriinta uu xambaarsan yahay waxa ay ku dulwareeganaysaa sida aynu ku horumarin karno nolosheena adduunyo iyo midda aakhiro. Mowduucyada qaar waa kuwa xiiso badan, oo aan u boggay intii aan akhrinaayey. […]
BAARIS AKADEMIYEEDKA CILMIGA BULSHADA: CASHARKII 2AAD
January 7, 2018 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Anshaxa Cilmibaarista Casharkii koowaad waxa aynu soo baranay farqiga u dhexeeya baaris iyo baaris akademiyeed. Casharkan waxa aynu ku baran doonaa anshaxa cilmibaarista, waxa aynu is dul-istaagi doonaa heshiiskii ‘The Nuremberg Code.’ Gu’gii 1947 waxaa socday xukun maxkamadeed oo lagu qaaday koox cilmibaareyaal, dhaqaatiir iyo agaasimiyaal. Waxa ay ku eedeysnaayeen in ay galeyn dambe ka […]
Baaris Akademiyeedka Cilmiga Bulshada: Casharkii 1aad
Maxay tahay baaris? Culummada darsa aqoonta sayniska iyo bulshada waxa ay soo gudbiyeen qeexitaanno kala duwan, iyaga oo ka eegay dhinacyo kala duwan. Martyn Shuttlewoth waxa uu soo gudbiyey qeexitaan guud, waxa uuna yiri “Baaris waa uruurinta xog, macluumaad iyo xaqiiqooyin si loo horumariyo aqoonta.” Dhanka kale, Creswell J. W asagana waxa uu yiri “Baaris […]